ककनीमा खाल्डामा डुबेर दुईको मृत्यु - नेपालबहस
सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच भेटर्वाता, १४औँ महाधिवेशन बारे छलफल
ककनीमा खाल्डामा डुबेर दुईको मृत्यु
बेत्रावती । बालुवा उत्खनन गरेको खाल्डोमा डुबेर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–१ मा सोमबार दुईको मृत्यु भएको छ ।
नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलका अनुसार साँझ ५ः३० बजेतिर खोलाकिनारमा खेल्न गएकी बालिका डुबेपछि उद्धार गर्न गएकी अर्की महिलाको पनि सोही खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भएको हो ।
स्थानीयवासीले खोलामा अवैधरूपमा बालुवा उत्खनन गर्ने व्यक्तिका कारण दुर्घटना भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
अघिल्लो लेखआज तराईमा हल्का वर्षा, केही ठाउँमा चट्याङ्ग पर्ने सम्भावना !
अर्को लेखअब मानविकीमा पनि चारवर्षे पाठ्यक्रम !
नवनिर्मित प्रहरी चौकी कुमरीको कार्यालय भवन उद्‍घाटन
मौसम परिवर्तनसँगै भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै
वडा कार्यालयमा आगजनी, महत्वपूर्ण कागजपत्र जलेर नष्ट !
पुनर्निमाणले फर्काएको खुसी
उपत्यकामा ५ दिनदेखि थुप्रियो फोहोर : अवरोधले उठेन फोहोर, संक्रमणको खतरा !